စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမသိသေးဘူးတဲ့လား | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
March 5, 2007, 2:38 pm
ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းများစာအုပ် မလင်းလက်မှာရှိလား. မလင်းလက်က ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စကားတွေကို တော်တော်လက်လှမ်းမှီနေလို့ပါ။ Post အသစ်လေးတွေ ဆက်ရေးပါဗျာ။ အမြဲအားပေးနေပါတယ်. Cbox မရှိတော့တာ နွေးထွေးမှုလေးတစ်ခု ပျောက်သွားသလိုပဲ။ မရေးစေချင်တဲ့ IP ကို Ban ထားပြီး Cbox ပြန်တင်လိုက်ပါလား။ ခင်လို့အကြံပေးကြည့်တာပါဗျာ။
Comment by Yan March 9, 2007 @ 5:28 am
ကျမမှာ ကိုယ်ပိုင်တော့ မရှိပါဘူး .. ကျမကိုချစ်ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေရင်းတွေ ၊ အဖွဲ့သားတွေစီက ငှားဖတ်လေ့ ရှိပါတယ် .. လိုက်ပြီးမေးလိုက် ၊ ရရင် ကျမကြိုက်တဲ့စာတွေဆို ကူးထားလိုက်ပါတယ် ……. ဒီလိုနဲ့ပဲ သိအောင်လုပ်နေရတာပါရှင် … စီဗောက်စ်မဖြုတ်ထားးပါဘူး .. အခုလိုမျိုး လာလာ အားပေးတာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ် .. ပြောစရာ ၊ ဝေဖန်စရာ အားမနာ တမ်းပြောပါ.. အမြဲတမ်း ဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်း မလျော့မနည်းရှိနေသွားမှာပါ.. ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေရှင်..
Comment by LIN LET KYAL SIN March 10, 2007 @ 1:18 am